HAWEENAY KURSI LOO DHIGAY UU SABAB U NOQDAY IN UU XUMAADO XIDHIIDHKA DIBLUMAASIYADEED EE TURKIGA IYO MIDOWGA YURU - Haldoornews
Xiisad diblumaasiyadeed ayaa ka dhalatay qaabkii ay dawladda Turkigu u soo dhoweysay wafti ka socda midowga Yurub oo toddobaadkii hore booqasho shaqo ku tegey dalka Turkiga. Waftigan waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Golaha baarlamaanka Yurub Charles Michel iyo madaxweynaha komihsanka / guddida fulinta Yurub oo ah haweenayda lagu magacaabo Ursula von der Leyn.
Madaxweynaha Turkiga ayaa afaafka hore ee qasriga madaxtooyada ku soo dhoweeyey labadan masuul ee ugu sarreeya Midowga Yurub oo kulan la yeelanayey, laakiin waxa ay dhibtu dhacday markii gudaha qasriga la galay ee sawirradii kaddib la gaadhay waqtigii wadahadallada loo fadhiisan lahaa.
Goobta uu madaxweynaha Turkigu ku qaabilay waftigan waxaa yaalay laba kursi oo ay is agfadhiistaan Erdogan iyo madaxweynaha Golaha baarlamaanka midowga Yurub Charles Michel, kuwaas oo salaantii kaddib fadhiisatay. Laakiin masuulkii saddexaad ee waftiga ayaa weyday kursigii ay masuuliyiintan ku ag fadhiisan lahayd waxa aanay ku qasbanaatay in ay fadhiisato kursi kale oo bush ah oo meel in yar ka durugsan labada masuul la dhigay si ay ugu fadhiistaan xubnaha kale ee waftiga Midowga Yurub iyo masuuliyiinta Turkiga ee madaxweynaha kala qaybgelaya kulanka.
Muuqaallada laga duubay munaasabaddan ayaa laga arkayey marwo Ursula von der Leyn oo ka xun waxa dhacay iyo in masuulkii la socday kelidii iska fadhiistay, ereyo cadho muujinaya ayaa ay ku guuxday, gacmaha ayaanay si cadho leh u taagtaagaysay, laakiin cidi ma dhaadin cabashada ay qabto. Sidaas awgeed waxa ay ku qasbanaatay in ay iska fadhiisato kursigii gaarka ahaa.
Arrintani waxa ay abuurtay buuq iyo xiisad diblumaasiyadeed oo midowga Yurub iyo dalka Talyaaniga oo ay gabadhani u dhalatayba ku dhaliileen dalka Turkiga. Guddoomiyaha Golaha Yurub oo u dhashay dalka Jarmalka ayaa isaguna ku calaacalay in arrintani ay hoos martay oo uu aad u qoomamaynayo sababta uu isaga fadhiistay, iyada oo ay soo xoogaysanayaan dalabaadka lagaga doonayo in uu is casilo sababtan awgeed.
Si kastaba ha ahaato ee dawladda Turkiga ayaa isku difaacday in qaladku uu ka yimi habraaca habmaamuuska Midowga Yurub oo isaga lagu saleeyey qaabka loo sii diyaariyey fadhigan, kaas oo ah in guddoomiyaha Golaha Yurub uu taagan yahay mansabka ugu sarreeya oo u dhigma hoggaamiyaha dalka ugu sarreeya.
Turkigu waxa uu sheegay in masuuliyiinta baratakoolka Turkiga iyo midowga Yurub ay kulankan hortii ka wada hadleen qaabka uu noqonayo baratakoolku oo ay isku waafaqeen, sidaas awgeed ay gef tahay in arrintan lagu dhaliilo dawladda Turkiga.
Guddoomiyaha Golaha baarlamaanka Midowga Yurub oo loo yaqaanno madaxweynaha Goluhu isaga iyo xubnaha goluhu waxa ay kursiga ku yimaaddaan doorasho toos ah oo laga qaaday dadweynaha dalalka midowga Yurub, sidaas awgeed maadaama oo uu metelo muwaadiniintana isaga ayaa hab-maamuus ahaan ka sarreeya masuulka kale ee isna ugu sarreeya midowga yurub oo ah guddoomiyaha komishanka / guddida fulinta, kaas oo isaguna metelaya dawladaha xubnaha ka ah midowga Yurub oo soo magacaaba.
Midowga Yurub oo arrintan aad u dhaliilay ayaa isaguna ku andacoonaya in Turkigu si badheedh ah u bahdilay gabadhan, isaga oo doonaya in uu si dadban midowga Yurub ugu sheego in aanu aqbalayn mid ka mid ah ajandeyaasha waftigu u socday oo ahaa in Turkiga lagu cadaadiyo in uu ka noqdo go’aanka uu ku laalay ka mid ahaanshiyaha axdiga dhowrista xuquuqda Haweenka ee midowga Yurub oo loo yaqaanno ‘Axdiga Istanbuul’.